Fully Automatic Mask Production mutsetse
CO2 Laser Chichatara Machine
Fiber Laser Chichatara
Umbwa muna 2008
makore 12 Zvakaitika
Vanopfuura 18 zvigadzirwa
Anopfuura bhiriyoni 2
Well anobudiswa Portable Fiber Laser rokuisa chiratidzo muchina Features 1. High yepamusoro internet jenareta, unhu hwakanaka gwapa, Manyiminya simba arambe achirema yunifomu, kugadzikana goho Manyiminya simba, akasangana kushanda kudiwa kuti choruzhinji pamusika; 2. RayFa kuzvidzora dzakabudirira-digital mukuru-nokukurumidza galvanometer scanner, duku kukura, kumhanya uye zvakaisvonaka pakusimba; chokupika zvasvika dzakawanda yemhando chechetere; , 3. Wamasimba kudzora hurongwa optimizes kubudiswa mashoko maererano siyana chikumbiro, zvitsigiso that m ...
Well anobudiswa Desktop Fiber Laser rokuisa chiratidzo muchina Features 1. High yepamusoro internet jenareta, unhu hwakanaka gwapa, Manyiminya simba arambe achirema yunifomu, kugadzikana goho Manyiminya simba, akasangana kushanda kudiwa kuti choruzhinji pamusika; 2. RayFa kuzvidzora dzakabudirira-digital mukuru-nokukurumidza galvanometer scanner, duku kukura, kumhanya uye zvakaisvonaka pakusimba; chokupika zvasvika dzakawanda yemhando chechetere; , 3. Wamasimba kudzora hurongwa optimizes kubudiswa mashoko maererano siyana chikumbiro, zvitsigiso mü ...
Desktop CO2 Laser chiratidzo ...
CO2 Laser kutema MACHINE
Well anobudiswa CO2 Laser chekawo muchina Laser wamabwe 1390 huni MDF Laser kutema muchina kunoita kushandisa kombiyuta zvirongwa kuzvidzora uye kusanganiswa kuzvidzora zvokuimba inofamba kudzora zvizere, kuitira kuti kuchekwa ndiye chaiwo uye kubudiswa kushanda iri nani nokuda vatengi zvinodiwa. Tinoshumira vatengi dzedu maererano nezvavanoda, saka isu sarudza yakanaka Software design, zvokuimba mamiriro yemagetsi zvinoriumba uye zvikamu kusarudzwa kuti kuchengeta kudzikama, zvakarurama uye nokukurumidza mukirasi yokutanga ...
Handheld internet Laser nomoto muchina Handheld L ...
Well anobudiswa kubhururuka Fiber Laser rokuisa chiratidzo Machine ...
Well anobudiswa Desktop Fiber Laser chokuguma waMaki ...
Well anobudiswa CO2 Laser chekawo muchina Laser engra ...
Dana Us Now: